सावधान ! एन्टीबायोटीकले यसरी बनाउँछ मिर्गौला धेरै , सेबन गर्नु उचित होइन… – News Nepali Dainik
सावधान ! एन्टीबायोटीकले यसरी बनाउँछ मिर्गौला धेरै , सेबन गर्नु उचित होइन…
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १४, २०७७ समय: १५:१६:५५
*#*#सामान्य पेट दुख्छ, ज्वरो आउँछ, घाउ हुन्छ। हामी यसको तुरुन्त निदान खोज्छौं। त्यसका लागि औषधी चपाउँछौ। अर्थात सामान्य शारीरिक समस्याको प्राकृतिक उपचार खोज्दैनौ।
***शरीरमा विभिन्न रोगको संक्रमणका कारण विभिन्न ब्याक्टेरिया तथा भाइरसको संक्रमण हुने गर्छ । यस्ता व्याक्टेरिया तथा भाइरसको संक्रमणलाई कम गर्न एन्टीबायोटिक्स सेवन गर्न दिइन्छ।***एन्टीबायोटिक औषधीको प्रयोगले शरीरमा रहेका व्याक्टेरिया तथा भाइरसलाई नष्ट पार्ने गर्छ। तर सबै एन्टीबायोटिक्सले शरीरका खराब व्याक्टेरियालाई मात्र नभएर असर व्याक्टेरियालाई पनि असर पार्ने गर्छ । जुन शरीरको नियमित कामको लागि पनि आवश्यक पर्ने गर्छ।
***यस्ता एन्टीबायोटिक्सको अनावश्यक प्रयोगले मिर्गौलाई असर पार्ने गर्छ। लामो समयसम्म एन्टीबायोटिक्स औषधीको प्रयोग गर्नेहरुमा शरीरमा विभिन्न समस्या हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ। आखिर एन्टीबायोटिक्सले मिर्गालालाई कसरी असर गर्छ ?***विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुनै पनि रोगको उपचारमा एन्टीबायोटिक्सको प्रयोग उच्च मात्रामा गरिन्छ । यसकै कारण टिवि जस्ता रोग भयावह हुने गर्छ ।
नेपालमा कति प्रकारका एन्टीबायोटिक्स प्रयोगमा छन्, त्यसको यकिन तथ्यांक छैन । तथापी, विश्व स्वास्थ्य संगठनले १६० प्रकारका एन्टीबायोटिक्सलाई मान्यता दिएको छ ।
(मिर्गौलामा पर्छ गम्भीर असर)
लामो अवधीसम्म एन्टीबायोटिक्सको सेवन गर्ने मानिसको मिर्गौलामा गम्भीर असर हुने गर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर बालबालिकामा धेरै हुने गर्छ । लामो समयसम्म यस्ता औषधीको सेवनले मिर्गौलामा पथ्थरीको समस्या हुनसक्छ।
**विशेषगरी एन्टीबायोटिक्स औषधीमा सल्फोनामाइड (एन्टीमाइक्रोवियल्स समूह) यस्तो क्रिस्टल उतपन्न गर्छ, जो पिसाबमा घुल्दैन । र, मुत्रमार्गमा जम्मा भएर पथ्थरीको कारण बन्ने गर्छ भने वैकोमायसिनको कारण मिर्गौला सुन्निन सक्छ।
यसबाहेक, एन्टीबायोटिक्स औषधीमा रहेको एमिनोग्लाइकोसाइड्स जस्ता टोब्रामाइसिनका कारण रेनल ट्यूबल सेल्स खराब हुनसक्छ ।
Last Updated on: January 27th, 2021 at 3:16 pm